BGR - - Tele RELAY တစ်ခုအဝလွန်ယခင်ကထင်ထက်ကင်ဆာပင်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ "အဝလွန်ဖြစ်ခြင်းသည်ယခင်ကယူဆထက်ကင်ဆာပင်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည် - BGR
ဒါကြောင့်တစ်ဦးပြင်းထန်စွာအဝလွန်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆေးရွက်ကြီးနှင့်အခြားကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှုရှောင်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းအတူကြာကြာနေထိုင်နေသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်စေနိုင်သောမှန်လျှင်အဝလွန်ခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုအတော်လေးကောင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်နေကြတယ် အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမကြာခဏလုပ်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးအရာပါပဲ။ တစ်ဦးအဝလွန်လူတစ်ဦးလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာနှင့်စပ်လျဉ်းသောဤအယူအဆသည် ပို. ပင်တိကျမှန်ကန်ယခင်ကအတွေးထက်ကြောင်းကိုပုံရသည်, နှင့်ထုတ်ဝေအသစ်တစ်ခုကိုသုတေသနပြု ကူးစက်ရောဂါများ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ် အဝလွန်ခြင်းမည်သူမဆိုမှန်းဆကြမည်ဟုထက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ကင်ဆာအန္တရာယ်အဘို့ဝေးပိုဆိုးကြောင်းအကြံပြု
အဝလွန်ခြင်းနှင့်ကင်ဆာအချို့အမျိုးအစားများအကြားအဆိုပါ link ကိုပြီးသားထူထောင်ခဲ့ပြီးပေမယ့်ဒီကင်ဆာဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုအပေါ်ပိုလျှံခန္ဓာကိုယ်အဆီများ၏ပြင်းအားနီးပါးအဖြစ်ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်မဟုတ်ပါဘူး။  ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကင်ဆာအန္တရာယ်အကြားဆက်ဆံရေးပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးရရန်, သုတေသီများမျိုးရိုးဗီဇသုတေသီများအကြောင်းရင်းနှင့်eဆုံးဖြတ်ရန်သုံးပြီးဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေရေး Randomization နာမကိုအမှီ Mendelian အဖြစ်လူသိများနေတဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့
သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာသုတေသီတွေကအဝလွန်နှင့်ကင်ဆာအကြားလင့်များတရားဝင်ဖြစ်ကြပေမယ့်စွန့်စားမှုကြောင့်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးလေးနက်မသာသောကင်ဆာအမျိုးအစားကိုတွေ့ရှိခဲ့မကြာခဏအဝလွန်ခြင်းနှင့်ကင်ဆာနဲ့ဆက်စပ်ရှစ်အမျိုးအစားစုစုပေါင်းကြည့်ရှု ကျွန်တော်အရင်ကထင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါသုတေသီများသည်ယခင်ခန့်မှန်းချက်အဝလွန်ခြင်းအဝလွန်နှင့်အဝလွန်ခြင်းမှတွေကပေါ်ကနေကင်ဆာများ၏အချိုးအစားတကယ်တော့သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားက "ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်ကင်ဆာများ၏အကြောင်းကို 6% ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းအကြံပြုသော်လည်းသတိပြုပါ "။
"ဒီစမ်းသပ်မှုများ၏အရေးပါမှုကိုသူတို့ကင်ဆာအန္တရာယ်အပေါ်ပိုလျှံအလေးချိန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတိတ်ကာလလျှော့တွက်နှင့်အဝလွန်ခြင်းကင်ဆာအတွက် ပို. ပင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းသိရသည်ကြောင်းအကြံပြုကြောင်း အဘယ်အရာကို University of Bristol က၏ဆေးဘက်ဒြေ၏ရစ်ချတ်မာတင်ကပြောပါတယ် "ရှေ့တော်၌, အကြံပြုခဲ့ ။ ကြေညာချက် .
သငျသညျကင်ဆာသင့်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားနေမယ့်ဆေးလိပ်သောက်ဖြစ်ကြလျှင်, သင်ဆေးလိပ်သောက်ကိုရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။ သငျသညျအဝလွန်နှင့်အတူတူပင်အားသာချက်ရှာနေဆိုရင်, အလေးချိန်ဆုံးရှုံးအကြံဉာဏ်ကောင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
Image ကိုရင်းမြစ်: Rex / Shutterstock